Macluumaad ku saabsan harada Victoria | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Macluumaad ku saabsan harada Victoria
Himilo – Harada Victoria sidoo kale waxaa loo-yaqaan Harada Nyanza ‘ Victoria Nyanza’ waa harada ugu weyn Africa iyo isha biyaha siisa webiga Nile waxa ay dhacdaa dalalalka Tanzania, Uganda iyo Kenya, cabbirka ay kufadhiso harada Victoria waxa uu gaarayaa 26,828 square miles, waa harada labaad ee ugu biyaha macaan caalamka marka laga sootago harada Superior oo dhacda waqooyiga America.
Victoria waxay muhiim u tahay ganacsiga dalka Uganda oo ah dal xiran, waxay ku xertaa dalalka Kenya iyo Tanzania oo laga soo dajiyo badeecada iyo qalabka dalka Uganda uu u baahanyahay.
Inkastoo dhowr magac ay leedahay Victoria hadana magaca saxda ah ee loogaran ogyahay waxaa laga keenay boqoradii England ee Queen Victoria.
Badmaax reer Britain ah oo lagu magacaabo John Hanning ayuu ahaa qofkii ugu horey ee soo hela harada Victoria 1850s, xilligaa oo uu ku jiray sahan uu ku sameynayey halka uu webiga Nile biyaha ka helo.
Harada Victoria waxaa lagu qiyaasaa inay soo jirtay 400,000 oo sanno, haradan waxa ay gurtay dhowr mar, mana lagaranayo sababta. Harada Victoria inta badan waxaa ku nool xayawaano duurjoog ah, maadaama hareeraheeda laga helo keyn aad u weyn.
Waxyaabaha ay gaarka la tahay haradan marka laga soo tago xayawaanada ku nool, waa goobta labaad ee Africa ee toos looga arki karo qoraxdua marka ay godka qorax-dhaca galeyso.
Madaama ay dhacdo bartamaha bariga Africa, harada Victoria biyaheedu waxay muhiim u yihiin guud ahaan dalalka bariga Africa dhaqan-kooda iyo taariiqdooda kumanaan qof oo dal-xiisayaal ah ayaa sanadkii u soo dalxiis tagA harada Victoria si ay u daawadaan.
W/Q: Cali Cabdullaahi Hilowle
Previous: Yay ahaayeen ciyaartoydii ku guulaystay kubbadda dahabka ah ee ka dhacay raadaarka kubbada cagta
Next: Waa kuwee Aabbayaasha iyo Wiilashooda iska soo garab muuqday,Heer Maamul iyo Ciyaarba